खगराज भन्छन ः राजनितीक नियुक्ती साथी बन्न हो ,शाषक होइन | KhelkudNews.com
खगराज भन्छन ः राजनितीक नियुक्ती साथी बन्न हो ,शाषक होइन
Published on February 18, 2017, by Manoj Shiama - Posted in Featured, Slideshow 0
“ हामी राजनिती गर्ने मान्छे खेल क्षेत्र खेलकर्मीहरुकै हो । यहाँ हामी साथी बन्न आएका हौ । शाषक होइन । ” पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष खगराज पौडेल भन्छन् । यही सोचका कारण खगराज खेलकर्मीका माझ विशेष लोकप्रीय पनि बनी रहेका छन् । उनी खेलकर्मी होइनन् । तर, सानै देखि खेलकुदमा अत्याधीक रुची । खेलमय वातावरण भएको कास्कीको ठिकुर पोखरीका स्थायी बासीन्दा खगराज बाल्यकाल देखिका विगत सम्झन्छन् ।
खेल हेर्न जाने । आफूले समर्थन गरेकाको जितमा रमाउने र हारमा खल्लोपनको महशुष हुने । उनी सोच्थे , खेलकर्मीको प्रदर्शनले जुन भुगोल, समुदाय र क्षेत्रको प्रतिष्ठा बढाउछ, उनीहरुको स्तरबृद्धी पनि त ती सबैको जिम्मेवारी र चासो हो । यसै सोच भएका खगराज एमाले राजनितीमा सक्रिय हुदै गर्दा खेलकुद महासंघको गण्डकी अञ्चल प्रमुख भए । उमेरले ३० बर्षे नेटो पनि नकाटेका यी युवा क्षेत्रीय खेलकुदका अध्यक्ष पनि भए । अध्यक्षको प्रतिष्ठा त महत्वपूर्ण थियो, तर जिम्मेवारी पनि उत्तिकै गह्ुंगो । उनले सोचे “क्षेत्रीय खेलकुदको अध्यक्ष त आबधीक हो । खेलकर्मीसंगको सम्बन्ध दिर्घकालीन हुन सक्छ ।” उनले बुझे, अध्यक्ष नरहे पछि दर्शकको रुपमा त्यही रंगशालामा प्रबेश गर्दा उत्तिकै आफ्नोपनको महशुष होस । सबैबाट त्यही सद्भाव पाइयोस । उनी प्रतिबद्ध भए, विगतमा सोचे झै सुधारका काम गर्नै पर्छ ।
खेल मैदान निमार्णका साथै अन्य भौतीक संरचनाको ब्यबस्थापन, प्रशिक्षणलाई ब्यबस्थित बनाउने र प्रतियोगिताको आयोजना तीन वटै क्षेत्रमा खगराज कार्यकालले फड्को मारेको छ । खेलकर्मीको आत्मसन्तुष्टि उनकोे अर्को चासो हो । जुन कुरामा उनी सधै सचेत रहन्छन् । सामान्य कुरामा गरिएको बेवास्ताले अन्यको मन दुख्ने काम नहोस भन्ने उनको चाहना हो । पोखरामा हुने प्रतियोगितामा सम्बन्धीत सबै खुसी नै देखिन्छन् । उनको तर्क छ, “ आफ्नो आबस्यकताको दायरा जत्ति हो । अरुको पनि त्यत्ति हुनु पर्छ भन्ने त बुझ्नु प¥यो नी । ” यसकारण खगराज संलग्न प्रतियोगिताको दौरान आयोजकले गर्ने ब्यबहारका कारण फरक हैसियत देखिदैन । सबैको आत्मसम्मानको ख्याल गरिन्छ । ” यसमा उनी सन्तुष्टि पनि छन् । कम्युनिष्ट राजनितीक पृष्ठिभुमिले सिकाएको ब्यबहारिक पक्ष मान्छन्, उनी यसलाई ।
अबका दिनमा उनका सामु थप चुनौती नभएका होइनन् । खेलकर्मीको आत्मसम्मानको अध्याय पछि अब स्तरबृद्धी र नेपाली खेलकुदमा पश्चिमा¥चलको पकड उनको अर्को चासो हो । भलीबलमा फेरी पश्चिमा¥चल शक्ति हुनका खातीर बनाइने योजनामा उनको चासो छ । आर्चरीलाई थप उकास्ने कुरामा उनी सचेत छन् । भैरहवा फेरी नेपाली क्रिकेटको पावर आउस हुन के गर्नु पर्छ ? यावत कुरामा उनी चिन्तीत छन् । फुटबलको लोकप्रीय स्थानको रुपमा परिचीत पोखरामा अब के गर्ने ? उनी यसमा पनि तल्लीन छन् । उनले सुनेका छन्, रुपन्देहीका कोशीष खड्का र प्रकास राजभण्डारी राम्रा तेक्वान्दोकर्मी हुन् । रुपन्देहीलाई नेपाली तेक्वान्दोको शक्ति बनाउन नँया योजनाका बारे उनले सल्लाह गर्ने नै छन् । पर्यटकीय खेलकुदले पोखरा अझ समृद्ध होस् यो पनि उनको चासो हो । अन्य खेलका बारे पनि उनि सचेत छन्् । अन्तराष्ट्रिय खेलकुद पढ्ने गरेका खगराजले वान वल्र्ड वान ड्रिमको कुरा बेइजिङ्ग ओलम्पिक देखि सुन्दै आएका छन् । उनी अबको आबस्कयता ठान्छन्,“ अल स्पोर्ट्स पर्सन वान ड्रिम”। प्राबीधीक , प्रसासनीक र ब्यबस्थापकीय तहका सबैको प्रयासले मात्र विकास सम्भव ठान्ने उनी सबैलाई “समृद्ध र प्रतिष्ठित पश्चिमाञ्चल खेलकुद ”अबको अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गर्छन् । ( तस्बिर ः खगराजको फेसबुकबाट साभार)